Voin-Kava Mahatratra taorian’ny voina nateraky ny fandalovan’ny rivodoza Haruna tany amin’ny faritra Atsimo-Andrefana Madagasikara · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 27 Febroary 2013 17:14 GMT
Vakio amin'ny teny Español, English, polski, Nederlands, Français
Tao anatin'ny herinandro monja, araky ny tatitry ny Birao Nasionaly Misahana ny Fiahiana ny Loza Voajanahary na ny BNGRC dia nahatratra 26 ny isan'ireo aina nafoy nateraky ny fandalovan'ny rivodoza Haruna, 16 ireo tsy hita popoka, 127 85 ireo naratra ary miisa 41'655 38'778 ankehitriny ireo voadona ka ny 15'384 12'524 amin'ireo dia tsy manan-kialofana. Noho ny fahasarotan-dalana dia tsy tonga any an-toerana ireo fanampiana na dia marobe aza ireo sary mitatitra ny havesatry ny faharavana sy ireo fangatahana fanampiana avy any amin'ireo foibe vonjy taitra isan-karazany. Raha mitory sahady ny renivohitra Antananarivo ho tsy miraharaha ny sasany dia maro koa ireo fikambanana sy antokon'olona any an-tanindrazana sy ampitan-dranomasina izay nihetsika avy hatrany hanampiana iny faritra voadòna iny.
Tantarain'ny namana mpiblaogy Andriamihaja Guénolé, mponina any Toliara ireo voina nidona tamin'ny mponina any:
“nisy nitantara tamiko fa mba iarovana ny ain'ireo zanany 3 dia misy ray aman-dreny izay nanafina ny zanany tao anaty placard. Nindaosin'ny riaka izany fanaka izany ary tsy fantatra na velona na maty ireo zaza ireo ankehitriny. Reny hafa, vitana Alakaôsy angaha, latsaka tao anaty vovo miaraka amin'ny zaza izay teny an-trotroany. Tsy tra-drano na ny reniny na ilay zanany. Tsy tsaroantsika matetika fa raha vaky ny tatatra miaro an'i Fiherenana dia noho ireo izay mihevitra azy ho fetsy ka mandrora mitsilany raha nangalatra ireo fefy rary vy [na gabion] izay mamehy sy manamafy ny fefiloha. Heveriko anefa fa tsy fotoan'ny tondro-molotra isika izao. Ny lahara-pahamehana ankehitriny dia ny famonjena izay mbola azo vonjena sy ny fanarenana ny rava amin'ny tananan'i Toliara.”
Raha ny fanimbana indray dia toy izao ny antsimpirihany araka ny lisitra navoaky ny Birao Nasionaly Misahana ny Fiahiana ny Loza Voajanahary na ny BNGRC (lisitra izay avaozina isan'andro):
Ny vohikalan'ny Birao Nasionaly Misahana ny Fiahiana ny Loza Voajanahary dia manapariaka sary maro, isan'izany ireo saripika nataon'i Nianja Ranovelo :
Ny tonia mpanatanteraka, Atoa Raymond Randriatahina, no manamafy koa fa:
Tao amin'ny Facebook indray, Atoa Noeliniayna Randrianarisoa manampy hoe:
Indro lahatsary Youtube ahitana ny lalana Ambohitsabo, any Toliara, sary napariaky Djedaw, izay ahitana ny haavon'ny rano ao an-tananan'i Toliara:
misy lahatsary hafa koa apariaky TVPlusReplay :
Marobe sahady ireo izay nametraka teny fampaherezana any amin'ireo forums samihafa sy pejy Facebook maro, ny sasany manontany izay fomba ahafahana mandray anjara fananampiana.
Lalah monina ao Antananarivo manoratra amin'ny namany any Toliara:
“Miara ory amin'ny mponin'i Toliara rehetra ary mahatsiaro manokana anao namana tsy foy Andriamihaja Guénolé“
Lomelle avy any Mahajanga, manampy:
Maro ireo fikambanana efa nihetsika hanampy. Ohatra azo tanisaina, ny Vatofototra izay manangona fanampiana hoan'ireo tra-boina. Ny Jeune chambre internationale (na JCI) ao Toliara na koa ny sampan'orinasa Axius humanity izay mikarakaraka fizarana sakafo sy kirakira ilaina an-davan'andro (na PPN).
Ireo sampan-draharaha vonjy aina sy ireo fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakana (na ONG) dia samy nandray andraikitra avy hatrany. Ny Plateforme d’Intervention régionale de l’océan Indien (na PIROI avy any La Réunion) sy ny Vokovoko Mena Frantsay (na Croix-Rouge française) dia namaly ny antso vonjy avy amin'ny Vokovoko Mena Malagasy ka hitatitra fitaovana vonjy tra-boina mahatratra 35 taonina avy any amin'ny nosy La Réunion (andrasana any Toliara ny Alatsinainy 4 Martsa).
Ny fikambanana “Action contre la Faim” (hetsika hanoherana ny hanoanana) dia mitatitra ireo hetsika efa ataony sahady taorian'ny rivodoza:
Ny sampan-draharaha iraisam-pirenena miady amin'ny hanoanana (na PAM: Programme Alimentaire Mondial) dia efa nanolotra sahady fanampiana ara-tsakafo maika an'ireo olona nifindra-monina mahatratra 7'800 isa: